WordPress - PDF ကိုတင်ယူပြီးထည့်သွင်းနည်း။ | Martech Zone
WordPress - PDF ကိုတင်ယူပြီး Embed လုပ်နည်း
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 7, 2019 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 7, 2019 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူ ဆက်၍ တိုးတက်ရန်လမ်းကြောင်းမှာ၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်မှတ်ပုံတင်ရန်အလားအလာမရှိဘဲအရင်းအမြစ်များကိုသူတို့ site ပေါ်တွင်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ PDF စာရွက်စာတမ်းများ - အဖြူရောင်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ၊ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လမ်းညွှန်များစသည်တို့ပါဝင်သည်။ မကြာသေးမီက ၀ ယ်ယူခဲ့သော SaaS ကုမ္ပဏီကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အသိဉာဏ်စက်ရုပ်အလိုအလျောက်, software ကိုရှင်းလင်းပါ။
၎င်းတို့၏ဟောင်းနွမ်းသော site အဟောင်းတွင် download လုပ်နိုင်သည့် button များရှိပြီး visitors ည့်သည်များ နှိပ်၍ PDF ကိုချက်ချင်းဖွင့ ်၍ ဖွင့်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကဒေါင်းလုပ်ခလုတ်တွေကို event tracking နဲ့တည်းဖြတ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ရလဒ်တွေကိုကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပြproblemနာကသူတို့ဟာများစွာသောအကြောင်းအရာအပိုင်းအစတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​သီးခြားအကြောင်းအရာစာမျက်နှာတခုကိုကုဒ်ရေးထည့်ဖို့ (သို့) ထပ်ထည့်ဖို့အချိန်ပိုလိုတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို download ခလုတ်ကိုအပေါ်လိုအပ်သောဖြစ်ရပ် tagging ။
အဖြေကပိုရိုးရှင်းပါတယ် အကယ်လို့ PDF ကို PDF ဖတ်သူတစ် ဦး ထဲထည့်လိုက်ရင် Google Analytics ထဲကတခြားစာမျက်နှာလိုပဲ pageviews တွေကိုခြေရာခံနိုင်မှာပါ။ သငျသညျကို install လျှင် PDF Embedder ပါ WordPress အတွက်သင်လုပ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ငါတို့မှာဥပမာတစ်ခုရှိတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း။ ဒီမှာကြည့်ပါ။
DK New Media စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစပြု Worksheet
PDF ၏အပေါ်ပိုင်း (သို့) အောက်ဘက်သို့ပြောင်းခြင်းနှင့်ရွေးချယ်နိုင်သော download ခလုတ်ကိုရွှေ့ခြင်း။
PDF menu ကို hover ပေါ်တွင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်မရွေးမြင်နိုင်သည်။
PDF thumbnail plugin တစ်ခု။
PDF ကိုအတွင်း Active link များ။
PDF ကို embed လုပ်တဲ့အခါဘာ code မှမလိုပါဘူး ကုဒ်တိုများ!
ဒီပလပ်အင်ကိုဆိုဒ်ပေါင်းများစွာတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၎င်းသည်ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ကအမြဲတမ်းပဲ။ ဒါကြောင့်ငါကငါလိုချင်တဲ့ site တော်တော်များများမှာသုံးနိုင်အောင်လိုင်စင်အပြည့်ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ဒေါ်လာ ၅၀ နဲ့တော်တော်များပါတယ်။
WordPress အတွက် PDF Embedder
၎င်းသည်ကမကထပြုသည့်မဟုတ်ချိတ်ဆက် link မဟုတ်ပါ။ WordPress အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကိရိယာတခုကိုကျွန်တော်မြှင့်တင်ချင်တယ်။
Tags: Adobeဘယ္လိုpdf ထည့်သွင်းပါpdfWordPress
ဇန်နဝါရီ 3, 2011 မှာ 3: 40 AM
@dknewmedia PDF ကိုမည်သို့ထည့်ရမည်ကိုသင်၏ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နောက်လိုက်ဖို့လွယ်ကူတယ်၊ ကျက်သရေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ပြaနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ Bravo! ကောင်းသောပို့စ်များကိုတက်ထားပါ။